Nicholas Kay oo soo gaba gabeeyay waayihiisii dalka Somaliya (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Amb. Nicholas Kay, Wakiilkii Qaramada Midoobe ee u qaabilsanaa dalka Somaliya, ayaa wuxuu soo gaba gabeeyay waayihiisii Somaliya, ka dib muddo laba sano iyo bar ihi oo uu ka soo shaqaynaayay.
Munaasabad ballaaran oo lagu sagootinaayay Wakiilkaasi, ayaa waxaa Arbacadii loogu sameeyay Xarunta Xalane, oo ku dhex-taala Garoonka Aadan Cadde Ee Magaalada Muqdisho.
Munaasabadan, ayaa waxaa ka qaybgalay Madaxda Dowladda Somaliya, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kaloo ballaaran, oo lagu soo casuumay inay ka qayb qaataan amba bixinta Nicholas Kay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo hadal ka jeedinaayay munaasabadan, ayaa wuxuu Nicholas Kay uu ku ammaanay mid wax qabad wanaagsan la yimid, mudadii uu ka shaqaynaayay Xafiiska UNSOM.
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke, ayaa isna sheegay in Nicholas Kay la soo magacaabay, xilli ay adkeyd xaaladda Somaliya, maantana uu soo gaarsiiyay marxalad rajo wanaagsan leh.
Amb. Kay oo ka hadlay munaasabadaasi, ayaa yri “Mudadii aan Somaliya joogay waxaan ka bartay wax badan. Waxyaabaha aan ka bartay waxaa ka mid ah, iyadoo shirar la’isku mari waayay, in marka laga soo baxo shirarkaasi aad dibadda ku arkeyso, kuwaa shirarka ku kala kacay, oo si kal iyo laab leh isu salaamaayo, oo hadana wada qoslaaya.”
“Dadka Somaliyeed waa dad ad adag oo hamigoodu siyaasadeed uu aad u fogyahay. Shakhsi kasta wuxuu kuu sheegayaa in uu rajeynaayo in dalka uu wax ka noqdo, sida Madaxweyne iyo Wasiirba.”
“Waan ku faraxsanahay in aan ka shaqeeyo dal sida Somaliya oo kala ah. Waan u xiisi doonnaa Somaliya, waa mid ka mid ah ah dalalkii iigu taariikhda wanaagsanaa, ee aan ka soo shaqeeyo.”
Mr. Kay, ayaa bartamihii sanadkii 2013-ka loo soo magacaabay inuu noqdo Wakiilka Qaramada Midoobe ee Somaliya, waxaana bishii November lagu soo bedelay Michael Keating. Kay iyo Keating ayaa ah diblomaasiyiin u dhashay dalka Britain.
Maamulka gobolka Sh/dhexe oo ka mamnuucay indho shareerka iyo mootoyinka Bajaajta magaalada Jowhar